६ राष्ट्रका हेर्ने पर्ने उत्कृष्ट चलचित्र अब युट्युबमा - BILMATEY
Recent News मनोरञ्जन
0 Comments चलचित्र
सिने र चलचित्र प्रेमीहरुको लागि खुसीको खबर छ। अब तपाईले विभिन्न राष्ट्रहरुको उत्कृष्ट चलचित्रहरु युट्युबमा हेर्न पाउनुहुन्छ। ती मध्ये ६ राष्ट्रका उत्कृष्ट चलचित्रहरुको लिस्ट तल प्रस्तुत छ।
कागबेनी, निर्देशक: भूषण दहाल
नेपालकै पहिलो डिजिटल फिल्म ‘कागबेनी’ हो जुन सन् २००८ मा पर्दामा पर्दर्शन गरिएको थियो। डब्लु.डब्लु जेकब्सको हरर कथा ‘द मन्किज पअ’ मा आधारित यो चलचित्र १२ वर्षपछि हेर्दा पनि अर्थपूर्ण लाग्छ।
मलेसियाबाट केही समयका लागि नेपाल आएका कृष्ण कागबेनी पुग्छन्र र उनको भेट बाल्यकालीन साथी रमेशसंग हुन्छ। कृष्ण र रमेश आ आफ्नो कामको लागि संगै मार्फा गाउँ जान्छन। बाटोमा एक जना साधुसंग भेट हुन्छ र साधुले कृष्णलाई हजारौं वर्ष पुरानो बाँदरको हात (पञ्जा) दिन्छन्। साधुका अनुसार त्यो पञ्जाले मान्छेको कामना पूरा गर्न सक्छ तर पञ्जाको दुरुपयोग भएमा ठूलो अनिष्ट आउन सक्छ।
कृष्णले त्यो पन्जा कसरी प्रयोग गर्छन र त्यो पन्जाले पात्रलाई के परिणाम दिन्छ ? यो जानकारीको लागि फिल्म हेर्नुहोला।
नुमाफुङ, निर्देशक: नवीन सुब्बा
नुमाफङ अर्थात् सुन्दर फूल सन २००४ मा बनेको लिम्बू भाषाको नेपाली चलचित्र हो । फिल्मको कथा लिम्बू समुदायमा प्रचलित छोरी दिँदा कुटुम्बसँग नगद, सुन आदि लिने चलन सुनौली–रूपौली प्रथामा आधारित छ। साथै सो प्रथाले निम्त्याउने अप्ठ्यारोलाई कथामा मूल भाव बनाएको छ।
फिल्मको कथा निमाको जीवन संघर्ष संग गासिएको छ। सुनौली–रूपौली प्रथाद्वारा निमा र ओजाहाङ्गको विवाह हुन्छ र निमा गर्भवती हुन्छिन। तर केही समयमा नै ओजाहाङ्गको मृत्यु हुन्छ र निमाको बच्चा खस्छ। निमाकोजीवनमा अपार दुखको बाढी आउछ। निमाले नचाहदा नचाहदै उनको उनको बुबाले दोस्रो विहे गराईदिन्छन। उनको दोस्रो दाम्पत्य जीवन कस्तो होला ? यो जान्नको लागि फिल्म हेर्नुहोला।
गोलमाल, निर्देशक: ऋषिकेश मुखर्जी
भारतीय उत्कृष्ट चलचित्र मध्ये एक गोलमाल हो जुन सन् १९७९ मा रिलिज गरिएको थियो। असभ्य र फोहोर शब्द र दृश्यबाट बन्चित गोलमाल परिवार संग बसेर हेर्न सकिने एक कमेडी फिल्म हो।
भवानीशंकर आधुनिक पहिरन मन नपराउने र परम्परागत मूल्य मान्यता राख्ने एकदमै कट्टर मान्छे हुन्। उनी जुँगा नभएका मान्छेलाई चरित्रहीन मान्छे भन्छन। एक दिन जुँगा राखेका रामप्रसाद कुर्ता पैजामामा जागिर माग्न आउँछन। उनको सरल आचरणबाट प्रभावित भई भवानीले रामप्रसादलाई जागिर दिन्छन। तर एक दिन आमा बिरामी भएको बहाना पारेर रामप्रसाद हक्की म्याच हेर्न जान्छन। आफुलाई छलेको भनेर भवानीले जागिरबाट निकाल्न खोज्दा रामप्रसादले हक्की हेर्न आफू नगएर आफ्नो जुँगाविहीन भाइ लक्ष्मण गएको होला भनेर भन्छन। उनको जागिर जोगिन्छ कि जोगिदैन? यो जान्न फिल्म हेर्नुहोला।
लिटल फरेस्ट (२०१८) – निर्देशक यिम सुन राय
त्यही नामको माङ्गा सिरिजमा आधारित “लिटल फरेस्ट” साउथ कोरियन ड्रामाटिक फिल्म हो। सन् २०१८ मा रिलिज भएको यो फिल्मले ४ राष्ट्रिय पुरस्कार जितेको थियो।
लिटल फरेस्ट सोङ हे वोन र उनकी आमाको प्रेम र मित्रताको कथामा आधारित छ। सोङ राष्टिय योग्यता परिक्षामा असफल भएपछि उनी आफु हुर्केको गाउँ फर्किन्छिन। उनको गाउँको नाम मि सुङ ली हो जुन स्याउ र चामल प्रशस्त उब्जने गाउँका रूपमा चिनिन्छ। तर सोङले आफ्नी आमालाई गाउँमा भेटाउदिनन। उनकी आमाले बनाएको सानो जंगल मात्र हुन्छ जसले आमाले लेखेका चिठी र बाल्यकालीन याद बोकेको छ खासगरि खानेकुराका परिकार। चलचित्रमा गाउँबाट सहर गएर केहि गर्ने सपना पनि साभार गरीएको छ।
के सोङ र उनकी आमाको भेट होला र भयो भने के सोङ आफ्नो सपना पुरा गर्न फेरी सहर फर्किन्छिन होला ? यसको लागि फिल्म हेर्ने पर्छ।
रेड सोरघुम (१९८८)- झांग यिमो
‘रेड सोरघुम’ नोबेल पुरस्कार जितेका चिनियाँ लेखक मो यानको ‘रेड सोरघुम’ नामकै प्रसिद्ध उपन्यासमा आधारित विश्वप्रसिद्ध चिनियाँ फिल्म हो। सन् १९८८ मा रिलिज भएको ‘रेड सोरघुम’ राष्ट्रिय र अन्तराट्रिय ख्याति पाउनुको साथै व्यापारिक दृष्टिकोणले एक सफल चलचित्र पनि हो।
रेड सरगमले द्वितीय चीन-जापान युद्धको चित्रण गर्छ जसमा एउटा युवतीको घरायसी ब्यापार र संघर्सको कथा छ। आफु भन्दा निकै जेठो उमेरको लोग्ने, सानै उमेरमा बिधुवा, रक्सी पसल र युद्धले निम्त्याएको विनाशहरु आदि चलचित्रको महत्तोपुर्ण पक्षहरु रहेका छन।
‘सङ अफ द स्प्यारोज’- माजिद माजिदी
‘सङ अफ द स्प्यारोज’ एक इरानी चलचित्र हो जुन सन् २००८ मा रिलिज भएको थियो। यो चलचित्रलाई नेसनल बोर्ड अफ रिभ्युमा उत्कृष्ट विदेशी भाषाको फिल्मका रूपमा छनोट गरिएको थियो।
‘सङ अफ द स्प्यारोज’ करिम भन्ने पात्रको जीवन संघर्षमा आधारित छ। करिम अस्ट्रिच फार्ममा काम गर्छन र एक दिन उनको जेठी छोरी हानियाको हियरिङ एड हराउँछ र उनलाई घर चाडो जानु पर्ने हुन्छ। घर पुगेर हियरिङ एड भेटाउछन् तर हियरिङ एड काम गर्दैन। सित्तैमा कान सुन्ने उपकरण बनाउन महिनौ कुर्नु पर्ने र आफै बनाए ठुलै रकम खर्च गर्नु पर्ने। उता फार्मबाट अस्ट्रिच भाग्छ र करिमले जागिर गुमाउछन्। कसरी हानियाको हियरिङ एड ठिक हुन्छ र के करिमले अर्को जागिर पाउछन होला ? त्यसको लागि फिल्म हेर्नु होला।
सङ अफ द स्प्यारोज
केक, निर्देशक: असिम अब्बासी
केक सन २०१८ मा रिलिज भएको पाकिस्तानी कमेडी ड्रामा फिल्म हो । ‘केक’ पारिवारिक हाँसखेल, मनमुटाव, सम्बन्ध व्यवस्थापन र चुनौतीमा आधारित एक रोचक फिल्म हो। फिल्मको कथाले पात्रसँगै दर्शकलाई हसाउँछ र रुवाउँछ।
दिदी बहिनीको सम्बन्ध दर्साउने यो फिल्ममा पात्र जरीन वृद्ध आमाबुवाको हेरचाह र घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेकी छिन। बहिनी जारा बुबालाई आइसियुमा भर्ना गरेको खबर पाएपछि लन्डनबाट कराँची आउँछिन्। घर फर्कनसाथ दिदीबहिनीको सम्बन्धमा प्रेम र घृणाको दोहोरो अन्तरविरोधको दृश्य फिल्ममा देखिन थाल्छ। यो अन्तरविरोधको पछाडी विगतको एउटा महत्वपूर्ण कारण छ र त्यो कारण बुझ्नको लागि फिल्म हेर्नुहोला।
← केकेआर बिरुद्ध खेलमा आरसीबी को सजिलो जीत
बर्दियामा वेवारिसे अवस्थामा पेस्तोल बरामद →
झापामा गोली लागेर एक जनाको मृत्यु, भयो सुरक्षाकर्मी परिचालन
भाँडाकुटी फिल्ममा मुकुन भुषालसंग बेनिशा हमाल आउने